Khamriga, Tubaakada & Alaabada La Xiriira Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Sigaarka elektarooniga ah - Qalabka Sigaar Cabidda ee ugu Fiican
Maxaa ku jira sigaarka elektaroonigga ah? Sigaarka elektarooniga ah waa qalab elektiroonig ah oo u eg sigaar cabista tubaakada. Waxay ka kooban tahay atomizer, ilo koronto sida batteriga, iyo weel sida kartridge ama haanta. Halkii qiiqa, isticmaaluhu wuxuu neefsadaa uumiga. Sidan oo kale, isticmaalka sigaarka elektaroonigga ah waxaa badanaa loo yaqaan "vaping." […]Read More
Sideen U Helaa Soo-saare Soo Saaraya Soosaaradayda?
Su'aal caadi ah ayaa ah sideen ku helaa shirkad soo saarta wax soo saarkayga? Maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad ka jawaabto su'aashan adigoo sharraxaya habka loo helo soo-saare iyo sida aad uga fogaan karto in lagaa dillaaco. Hal dariiqo oo tan lagu sameeyo waa iyadoo la akhriyo markhaatiyada macaamiisha ee ganacsiyada kale ee isticmaalay […]Read More
Waxaa jira dad badan oo soodhad sameeyayaal ah suuqa maanta. Waxay noqon kartaa wax yar oo culus in la isku dayo oo la go'aansado nooca iibsiga, ama xitaa waxa qaababku noqonayaan. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa waxa laga raadsado soodhaha sameeya, iyo kuwa ku habboon noocyada cabitaannada. By […]Read More
Alaab-qeybiyeyaasha Muraayadaha Liqueur - Halkee laga heli karaa iyagoo jooga SaleHoo
Alaab-qeybiyeyaasha Liqueur Glasses waa habka ugu habboon ee loogu helo muraayado wanaagsan xafladdaada xigta. Macno malahan haddii aad tuurayso xaflad rasmi ah ama mid aan rasmi ahayn, waxaad ku kalsoonaan kartaa shirkaddan inay bixiso xulashooyin ballaaran oo muraayado ah oo u dhigma xaaladda munaasabadda. Haddii aad raadineyso […]Read More
Waxaa laga yaabaa 28, 2020 0 comments
Sida loo Doorto Bixiyeyaasha Soodhada Soda ugu Fiican
Ma waxaad tahay taageere soodhadh ah? Ma kugu adag tahay inaad hesho iibiyaha ugu fiican ee soodhaha sameeya? Markaad ka dhex doorato soodhaha sameeyaha ugu fiican wax badan ayey noqon kartaa hawl adag haddii aadan garanayn waxa aad ka raadinayso iibsashadaada. Waxay qaadataa xoogaa waqti iyo dadaal ah si loo go'aansado mishiinka ugu fiican…Read More